Java Script | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Atanas Neshkov AndroChef Java Decompiler 1.0.0.7 | 4.41 MB
With AndroChef Java Decompiler you can decompile apk., dex, jar and java class-files. It’s simple and easy. AndroChef Java Decompiler is Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 and 8.1 decompiler for Java that reconstructs the original source code from the compiled binary CLASS files.
AndroChef successfully decompiles obfuscated Java6and Java7.class and .jar files. Support Java language features like generics, enums and annotations.
According to some studies, AndroChef Java Decompiler is able to decompile 98.04% of Java applications generated with traditional Java compilers –avery high recovery rate.
It is simple but powerful tool that allows you to decompile Java and Dalvik bytecode (DEX, APK) into readable Java source. Easy to use.
– Select the file (apk, dex, jar, class) or folder you want to decompile.
– Selectafolder to decompile file to (Destination directory).
– Click on “Decompile” -button.
ကဏ္ဍ Android, Java Script, manager, Phone Application
Programming လေ့လာ သူများ အတွက် Java developerguide (မြန်မာလို) (4.2MB)
Programming လေ့လာနေသူများ အတွက် Java developerguide (မြန်မာလို) စာအုပ်လေး တင်ပေး
Programming လေ့လာနေသူများ အကြိုက်ဖြစ်မှာပါ။ စာမျက်နှာ ပေါင်း ၂၂၅ မျက်နှာ ပါဝင်ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာ ဂျာနယ်ရဲ့ စုစည်းမှုလေး ပါခင်ဗျာ။
Programming လေ့လာနေ သူများ ဆောင်ထားသင့်တဲ့ စာအုပ်လေး ဖြစ်ပါတယ်။
အဆင်ပြေတယ် ဆိုရင် မန်ဘာဝင်ပြီး၊ Facebook Like လုပ်ခြင်းဖြင့် အားပေးပါ ခင်ဗျာ။
မျှဝေသူ Unknown မှာ Thursday, August 29, 2013 No comments:
ကဏ္ဍ eBook, Java Script, PDF, နည်းပညာစာအုပ်, မြန်မာစာအုပ်
အသေးစား Programming ဘာသာရပ်ကိုဆိုလိုပါတယ်၊ Scripting ဘာသာရပ်တွေ အများကြီး
တခြား ဘာ Server အကူအညီမှ ဘာ Platform တူညီမူတွေမှမလိုပဲ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်၊
ထွေးတဲ့ Programming ဘာသာရပ်တစ်ခုပါ၊
လေးတွေထည့်သွင်းနိုင်တယ်၊ Programmer မဟုတ်တဲ့ Web Designer နဲ့ Webdeveloper တွေ
ကို သူတို့ Develop လုပ်နေတဲ့ ၀က်ဆိုက်မှာ ပြောင်မြောက်တဲ့လုပ်ဆောင်မူတွေထည့်သွင်းအသုံး
အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပေါ်မှာမူတည်ပြီး အလုပ်လုပ်စေမယ့် Program အသေးစားလေးတွေကို ၀က်
မယ့် Form Validation အပိုင်းပါ၊
Database ကို hack တာမခံရအောင် ကာကွယ်ဖို့အတွက်ပါ၊ နောက်ပိုင်းမှာ သင်ပြပေးထားပါတယ်၊
Browser ကို ချိတ်ဆက်ပြီး လိုအပ်တဲ့ပြောင်းလဲမူတွေလုပ်နိုင်တယ်၊
တွေကို ဥပမာ အနေနဲ့ ပြောပြပေးပါမယ်၊
များ List များမှာ တွေ့ရတာများပါတယ်၊ အသုံးပြုသူက Menu Link လေးတစ်ခုပေါ်မှာ Cusor ကိုထောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ရုတ်တရတ် Cusor ထောက်မိတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ Menu Link က အရောင်ပြောင်းသွားမယ်၊ ပုံစံပြောင်းသွားမယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ဓာတ်ပုံ အသေးလေးတစ်ခုပေါ်ကို Cursor ထောက်မိတဲ့အခါမှာ ဓာတ်ပုံအကြီးကြီး အလိုလိုပေါ်လာမယ်၊
ဒီထက်ပိုပြီး ဆန်းသစ်ချင်သေးရင် Menu Link တွေ တစ်ထစ်စီရှောကျလာတဲ့အချိန်မှာ ကြိုတင်ဖန်
တီးထားတဲ့ Function တစ်ခုကိုခေါ်ပြီး သီချင်းသံတွေ (သို့) လင့်တွေပေါ်ကို Cursor ထောက်မိရင်
ပ်ါစေမယ့် တုံ တုံ တုံ လို့မြည်စေတဲ့အသံတွေကိုပါ လွယ်ကူစွာထည့်သွင်းနိုင်ပါသေးတယ်၊
ဒီလို MouseOver/Out Effect တွေကို အခြားသော Looping , Fucntion တို့နဲ့ တွဲပြီး Dropdown
Menu လုပ်ပုံတွေ Cursor ထောက်မိတာနဲ့ အသံမြည်စေပုံတွေ ဓာတ်ပုံပေါ်လာစေပုံတွေနဲ့ အခြား
သော နည်းပညာတွေကိုလက်တွေ့ 72Coder ဗွီဒီယိုသင်ခန်းစာမှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်၊
Javscript ကိုအသုံးပြုပြီး SlideShow တွေကိုပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်၊ SetTimer ကိုအသုံးပြုပြီး အလို
လျှောက် တစ်ပုံပြီးတစ်ပုံပြောင်းလဲနေတဲ့ Auto SlideShow တွေကိုဖန်တီးနိုင်သလို ရိုးရိုး Function
နဲ့ OnMouseClick Effect ကို အသုံးပြုပြီး အလုပ်တစ်ချက်နှိပ်တိုင်း ပုံတစ်ပုံပြောင်းသွား စေတဲ့
ယနေ့အွန်လိုင်းမှာရှိတဲ့ ၀က်ဆိုက်တွေအတော်များများမှာသုံးနေတဲ့ Flash အသုံးပြုထားတဲ့
သာချက်ကတော့ တကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ Flash အသုံးမပြုသေးတဲ့ ကွန်ပြူတာ အသုံးပြုသူတွေကို
Flash မလိုအပ်တဲ့ SlideShow တွေဖော်ပြထားနိုင်ခြင်းပါပဲ၊
ဒီမှာသေချာပြောလိုတာတစ်ခုကတော့ Flash နဲ့ Action Script အသုံးပြုတဲ့ SlideShow တွေ့
Function ပိုမြင့်ပီး ပိုလှပနိုင်ပေမယ့် Flash Software မတပ်ဆင်ထားတဲ့ ကွန်ပြူတာတွေမှာတော့ ဘယ်လိုမှ ဖွင့်လို့မရတဲ့ SlideShow တွေဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်၊
များများ အသုံးပြုထားတဲ့ Interative Web Design တွေ ဆွဲတတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်၊ ဘာမှလှုပ်ရှား
မူမရှိတဲ့ ၀က်ဆိုက် အသေတွေခေတ်က ကုန်သွားပါပီ၊
အခြေခံ သင်ခန်းစာတွေကို တဆင့်စီသင်ပြထားသလို သင်ပြထားတဲ့ အခြေခံသင်ခန်းစာတွေကို စာတွေ့သာလျှင်မဟုတ်ပဲ လက်တွေ့သုံးတတ်လာအောင် အခန်းတစ်ခန်းစီမှာ အဆင့်တစ်ဆင့်
တတ်တိုင်း အဲ့ဒီ့ အဆင့်ကိုလက်တွေ အသုံးပြုပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့နည်းတွေကိုသင်ပြထားပါတယ်၊
နောက်ဆုံး အဆင့်မြင့် သင်ခန်းစာတွေမှာ သင့်ဝက်ဆိုက်မှာ နှင်းတွေကျနေအောင် မိုးတွေရွာ
နေအောင် သစ်ရွာက်တွေကြွေကျနေအောင် ဘယ်လို JavaScritp သုံးပြီး လုပ်ရမလဲ ကုတ်ရေး
မျှဝေသူ ရစ် မောင် မှာ Friday, February 22, 20132comments:
ကဏ္ဍ Java Script